Siri zvinogutsa akapindura 52.3% yemibvunzo yakaitwa mukuyedzwa kune iyo HomePod | Ndinobva mac
Siri akapindura zvinogutsa ku52.3% yemibvunzo yakaitwa mukuyedzwa kuPambaPod
Zvinoenderana neazvino bvunzo dzehungwaru dzinoitwa nekambani Loup mashandiro, Apple's HomePod yakabudirira kubvunza inopfuura hafu yemibvunzo yatinobvunza. Miedzo iyi yakaitwa mumamiriro akasiyana uye hunhu hweruzha, kurerukirwa kwekushandisa kwechigadzirwa uye kumhanya kwemhinduro, pakati pezvimwe zvinhu zvinoyerwa, zvakaedzwa.
Kunyangwe, maererano neichi chidzidzo, Siri paPambaPod akanyatsoziva 99.4% yemibvunzo yakaitwa, chete 52.3% yavo yakapindura nenzira kwayo, kunze kwemibvunzo ingangoita mazana masere pane matatu akasiyana Mapoto ePamba.
Zvichienzaniswa nevakwikwidzi vayo, Siri haana kubuda zvakanyanya: Amazon Alexa 64% vakapindura zvinogutsa, Imba yeGoogle yakasvika 81%, uye Cortana anobva kuMicrosoft, yaive yechokwadi muna 57% yematambudziko. Mugirafu pazasi tinogona kuona mhinduro nezvikamu izvo chidzidzo ichi chinojekesa:
Zvinoenderana nezvakabuda mukuferefeta uku, Siri inovandudza pane vanopikisana nayo painobvunzwa misoro yemimhanzi pamwe nekubvunza kwenzvimbo senge nzvimbo dzekudyira kana zvitoro zviri padyo. Mune mimwe mibvunzo yakajairika, mubatsiri weApple haasati achirarama zvinoenderana nezvinotarisirwa.
Vatsvagiri vanotsanangura muchidzidzo ichi kuti HomePod naSiri vanofanirwa kukura nekufamba kwenguva kuenzanisa kana kurova vanokwikwidza varipo uye hauchazvikwanisi kungo wedzera "zvemukati" mibvunzo kukarenda, email, kufona, GPS kufamba, uye kumwe kunyorera kwekushandisa.
Chii chinomira pachena muPambaPod zvine chekuita nevakwikwidza, iko kugona kutora izwi remushandisi pazwi rakajairika. Iyi ficha yakatosiyana neayo makuru makwikwi.
Uyewo, Ruzha rwemhando yeApple "toy" nyowani inosimbiswa kuve inonakidza. Ruzha rwakachena uye runopfuura zvese zvinotarisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Siri akapindura zvinogutsa ku52.3% yemibvunzo yakaitwa mukuyedzwa kuPambaPod
Isu takaedza iyo Dodocool DA158, yakasimba yekupeta misoro yemahedhifoni